January 2018 - Abdikadir Askar
Hadaba, waxa aan uga gol-leeyahay qoraalkan in aan qeexid kooban ka bixiyo muhiimadda Wada-Xidhiidhka Dawladda. Wada-Xidhiidhka Dawladdu waa mid laba geesood ah- dawladda iyo shacabkeeda. Ula-jeedada laga leeyahay waa in ay dawladdu si faahfaahsan ugu gudbiso muwaadiniinta xogta ku saabsan waxqabadkeeda, siyaasadeheeda iyo hiigsigeedaba. Waa astaan muujinaysa maamul wanaag, kanna turjumaysa dastuurkeena ku dhisan nidaamka dimquraadiyadeed. Continue reading “Hal Dawlad, Hal Cod”
Author Abdikadir AskarPosted on January 3, 2018 March 24, 2021 Format GalleryCategories ArticleLeave a comment on Hal Dawlad, Hal Cod
Waa sheeko-faneed murugo iyo saxariir-nafeed xanbaarsan. Dhagaraha dhacaya ee sheekadan ku duugani waa is-difaacid, nolol-raadis iyo aar-goosi lagu xardhay midab-diimeed.
Sawirro is-micnaynaya oo si walba u xanuun badan, daboolkanna ka qaadaya nolosha adag ee laga dhaxlay is-eedkii shacabka Soomaaliyeed. Continue reading “Gelbiskii Geerida”
Author Abdikadir AskarPosted on January 2, 2018 Format GalleryCategories Somali, StoryLeave a comment on Gelbiskii Geerida